Rehefa misitrika ny fizahan-tany dia manandrana mitaona ireo mpizahatany hiverina ny orinasa
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Rehefa misitrika ny fizahan-tany dia manandrana mitaona ireo mpizahatany hiverina ny orinasa
Jona 22, 2009
SAN JOSE, Costa Rica - "Rehefa mitsoka i Etazonia dia mahazo sery isika", hoy ny tompona hotely Costa Rican iray vao tsy ela akory izay.
Tsy gripa kisoa no nolazainy.
Ny indostrian'ny fizahantany, zava-dehibe amin'ny toekarenan'i Costa Rica, dia nihena noho ny fidinan'ny fihenan'ny tany, miaraka amin'ny tombana hatramin'ny 13 isan-jato ny fihenan'ny mpitsidika amin'ny telovolana voalohany tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny 2008. Ankehitriny, miaraka amin'ny fiandohan'ny vanim-potoana ambany , ireo mpanao trano fandraisam-bahiny sy mpandraharaha mpizahatany dia miomana amin'ny fianjerana mafy kokoa.
Azo antoka fa nahatsapa an'io fikomiana io ny Casa Roland Hotel Group. Ny orinasa dia nijery ny filentehan'ny efitrano hatramin'ny 40 isan-jato, hoy i Christian Castro, talen'ny varotra sy varotra orinasa.
Maherin'ny roa ampahatelon'ny orinasa eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany no nitatitra ny telovolana voalohany fa miadana kokoa noho ny mahazatra ary efa ho ny ampahatelony no voaroaka tao anatin'izay volana vitsy lasa izay, hoy ny National National Chambre Tourism. (Costa Rica dia tsy manana tarehimarika tsy an'asa ankehitriny, fa ny mpandinika dia nanombana fa tafakatra hatramin'ny 7 isan-jato izany raha latsaky ny 5 isan-jato tamin'ny taon-dasa.)
Raha ny voalaza, ny hetsika ara-toekarena dia niadana nandritra ny enim-bolana nisesy, nahatonga ny mpahay toekarena mitombo hitomany noho ny fitotonganan'ny toe-karena. Ny fizahantany, miaraka amin'ny famokarana sy ny fanamboarana, dia anisan'ny sehatra tena voa mafy.
Na eo aza ny lohateny lehibe nampanantenaina tao amin'ny pejin'ny dian'ny gazety amerikana, toa ny “Costa Rica Any Way You Want It” tao amin'ny The New York Times farany teo, ”matahotra ireo orinasa toa an'i Casa Roland sao handresy ny Amerikanina voafintina vola sy ny namany any Eropa sy manerantany ' t mitsidika an'ity paradisa tropikaly ity atsy ho atsy.
“Mbola tsy nahita herintaona mahery noho izao aho,” hoy ny talen'ny mpitantana sy talen'ny marketing ao amin'ny Costa Rica, Maria Amalia Revelo. Ny departemanta misy azy dia manana teti-bola 20 tapitrisa $ hampiroboroboana ity toerana ity manerantany.
Mandritra izany fotoana izany, ny sasany amin'ireo mpifanolo-bodirindrina amin'i Costa Rica dia mankafy vanim-potoana fitomboana maharitra. Niakatra 3 isan-jato ny isan'ny mpitsidika an'i Panama, ny 4 isan-jaton'i Guatemala ary ny 11 isan-jaton'i Nikaragoa. Juan B. Pasos, tale jeneralin'ny Hotel Alhambra ao amin'ny tanànan'ny mpanjanatàn'i Granada, Nikaragua, dia nilaza fa ny krizy dia tsy nahatonga firy tao amin'ny trano fandraisam-bahiny misy efitrano 60.
Raha jerena fotsiny ireo isa dia toa sahala amin'ny hoe nisy olona nanintona ireo mpizahatany tany Costa Rica - nahatratra 2 tapitrisa ny isan'ireo mpizahatany tonga tao amin'ny firenena tamin'ny taon-dasa.
Saingy tsy izany, hoy i Coralia Dreyfus avy amin'ny Filan-kevitry ny fizahantany Amerikanina afovoany. Nilaza izy fa amerikana ireo mpitsidika voalohany an'i Costa Rica, “izay mijaly mafy kokoa noho ny vokatry ny krizy ara-toekarena.” Ny mpitsidika matetika any amin'ny faritra sisa rehetra dia ny Amerikanina Afovoany, izay ho mora kokoa aminy ary lavitra mora vidy kokoa, matetika ataon'ny tany.
Na izany aza, tsy milaza ny tantara manontolo ireo isa. Betsaka ny mpitsidika an'i Goatemalà tonga mandritra ny roa na telo andro, fa ny salan'isan'ny fijanonany any Costa Rica dia 11 andro.
Orinasa maro no nihetsika haingana hamaly ny zava-misy ara-toekarena vaovao.
Recreo Costa Rica, fanangonana villa mihaja amin'ny morontsiraka avaratry Pasifika, dia manolotra "Fisondrotana Layoff Layback", manolotra iray ka hatramin'ny roa alina maimaim-poana (miankina amin'ny halavan'ny famandrihan'izy ireo) an'ireo mpiasa voaroaka vao tsy ela akory izay.
"Hitanay fa ny sakaizanay sasany izay nesorina teto (tao New York City) dia nomena fonosana fisintomana tena mahasalama," hoy i Will Candis, avy amin'ny Canis Communications any New York, izay misolo tena an'i Recreo Costa Rica. Nilaza izy fa noho izany ary ny fanosehana marketing hafa, dia mbola feno foana ireo villa.
Castro, avy amin'ny Casa Roland, dia nilaza ihany koa fa ny vondrona hotely dia nampihatra fepetra mahasalama, ao anatin'izany ny tavoahangy misy divay misy sakafo hariva ary fepetra hafa ankasitrahana arakaraka ny halavan'ny fotoana ijanonany.
"Tena zava-dehibe daholo izany sanda fanampiny izany ka mahatsiaro afa-po ao amin'ny Casa Roland ny mpanjifa, ary amin'izay, amin'ny alàlan'ny firesaka am-bava, ny olona dia manampy an'i Costa Rica amin'ny fitsidihana an'i Costa Rica," hoy i Castro.
Mandritra izany fotoana izany, mihoatra ny fihenam-bidy sy ny fifanarahana “fandroahana”, ireo mpanentana ny orinasa ara-tontolo iainana any Costa Rica dia manamafy fa ny firenena dia mila mifikitra amin'ny heriny, ny tontolo iainana, mba hahomby.
Ho an'i Ronald Sanabria, filoha lefitry ny fizahan-tany maharitra ao amin'ny ONG iraisam-pirenena Rainforest Alliance, ny krizy dia tokony hiasa ho toy ny "fizahana tena zava-misy" ho an'ny indostria manerantany izay manakaiky ny sisin'ny tendro-baomba mipoaka.
"Haingana loatra izahay," hoy izy. “Amin'ny lafiny iray, mieritreritra aho fa tonga tamin'ny fotoana nilana azy izany ho an'ny toerana maro izay efa ho lasa tsy maharitra [noho ny] fampandrosoana tsy tambo isaina.”
Nilaza izy fa nieritreritra ireo orinasa efa nandray fomba fanao maharitra toy ny angovo azo havaozina - orinasa sahabo ho 100 no voamarina eo ambanin'ny fandaharan'asa maharitra ho an'ny firenena - no mahazo valisoa avy amin'ny fampiasam-bolan'izy ireo miaraka amin'ny fandaniana ambany kokoa, ary hahita tombony bebe kokoa ho "fironana mankany amin'ny maro mitombo hatrany ny mpanjifa miaro ny tontolo iainana. ”
Amin'ny ankapobeny, Sanabria dia toa malahelo i Costa Rica fa handresy ny hatsiakan'ny mpandeha.
"Heveriko fa ny indostrian'ny fizahantany dia manana fahaiza-manao matanjaka tsara amin'ny fiovana," hoy izy. “Nandalo helo ity orinasa ity. Nomenao anarana hoe: ady, fanafihana mpampihorohoro, tsunami… ary miverina haingana izy io. ”
Ahoana no fomba hanararaotana ny fialan-tsasatra ataonao
Nosokafan'i Suisse ny sisin-taniny ho an'ny Golfa vita vaksiny ...
Ny sidina San José mankany Chicago tsy mijanona miverina amin'ny amerikanina ...
IMEX America Smart Monday keynotes dia manasongadina dokotera ...
Noraran'i Torkia ny sidina mivantana avy any Bangladesh, Brezila ...
Mpiasa fizahan-tany Jamaika 50,000 XNUMX niverina tamin'ny asany farany ...